Ego iji na-ekiri mgbe ị na-enweta ihe ndị dị mma n'ọdụ ụgbọ mmiri Canada
Ọ bụrụ na ịnọ na mpaghara Canada nke ókèala na ịzụ ahịa na ebe nrụọrụ weebụ US, ego efu nwere ike ijide gị na mberede. Enwere ihe ị kwesịrị ịchọrọ tupu ị nye nọmba kaadị akwụmụgwọ gị.
Nke mbụ, chọpụta na ụlọ ọrụ ịzụ ahịa na-enye mbupu mba ụwa ma ọ bụ na ọ dịkarịa ala mbupu na Canada. Ọ dịghị ihe ọzọ na-ewe iwe karịa ịga site na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, na-ejuputa ụlọ ahịa gị ma chọpụta na onye na-ere ahịa adịghị ebufe n'èzí na United States.
Mbupu ego na Canada
Ezi saịtị ga-edepụta usoro atumatu na usoro ha n'ihu, na-abụkarị n'okpuru ọrụ ndị ahịa ma ọ bụ ngalaba enyemaka. A na-ekpebi ebubo ebubo site na ibu, nha, anya, ọsọ, na ọnụ ọgụgụ nke ihe. Jide n'aka na ị gụọ nkọwa ahụ nke ọma. Echefukwala itinye aka na ọnụego mgbanwe maka ebubo ebubo nakwa maka ọnụ ahịa nke ngwaahịa ahụ. Ọbụna ma ọ bụrụ na ọnụego mgbanwe ahụ dị gị mma, ụlọ ọrụ gị na kaadị akwụmụgwọ ga-agbakwunye ụgwọ maka mgbanwe nke ego.
Ego ebubo na mbupu ebubo (na-abụkarị mail ma ọ bụ onye ozi) abụghị ọnụahịa niile ị ga-akwụ iji nweta ngwugwu ahụ gafee ókèala Canada. Ọ bụrụ na ngwongwo na-abịa n'ofe, ị ga-atụlekwa, ma dịrị njikere ịkwụ ụgwọ, ọrụ omenala Canada , ụtụ isi na omenala ụgwọ ọrụ.
Ọrụ Omenala Canada
N'ihi United States Free Trade Agreement (NAFTA), ndị Canada agaghị akwụ ụgwọ maka ọtụtụ ihe ndị America na Mexico.
Ma kpachara anya. Naanị n'ihi na ịzụta ihe site na ụlọ ahịa US adịghị apụta na e mere ya na United States. O kwere omume na ọ batara n'ime United States na mbu ma, ọ bụrụ otú ahụ, a ga-enyerịrị gị ọrụ mgbe ọ na-abata na Kanada. Nyochaa tupu ịzụta ma ọ bụrụ na o kwere omume ịnweta ihe edere site na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ma ọ bụrụ na ndị Canada na-ekpe ikpe na-ekpebisi ike.
Ọrụ dị iche iche na ngwaahịa dịgasị iche iche, dabere na ngwaahịa ahụ na mba ebe e mepụtara ya. N'ozuzu, na ihe ndị e nyere n'iwu site n'aka ndị ahịa ala ọzọ, ọ dịghị nyocha ọ gwụla ma Ụlọọrụ Canada nwere ike ịnakọta ma ọ dịkarịa ala $ 1.00 n'ọrụ na ụtụ isi. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ụfọdụ gbasara omenala na ọrụ Canada, kpọtụrụ Ọrụ Ozi Ịgba Ozi n'oge awa azụmahịa ma gwa onye uweojii okwu.
Ụtụ isi nke Canada na ngwaahịa bara uru na Canada
Nanị ihe ọ bụla mmadụ batara na Kanada ga-agbaso Ụtụ Ọrụ na Ọrụ (GST) nke pasent ise. A na-atụle GST mgbe arụ ọrụ omenala.
Ị ga-akwụ Ụgwọ Ụtụ Isi nke Canada (PST) ma ọ bụ Ụtụ ahịa Sales Quebec (QST). Ụtụ ụtụ isi ahịa nke obodo na- adịgasị iche iche site n'otu mpaghara gaa n'ọzọ, dịka a na-eji ngwaahịa na ụtụ ọrụ a na-etinye ụtụ isi na otu esi etinye ụtụ isi.
N'akwụkwọ ndị Canada na Tax Tax Sales (HST) ( New Brunswick , Nova Scotia , Newfoundland na Labrador, Ontario na Prince Edward Island ), a ga-akwụ gị ụgwọ HST, kama ịwepụ ụtụ ahịa GST na ụtụ isi .
Akwụ ụgwọ ndị na-eme omenala
Ụgwọ maka ọrụ ndị na-ere ahịa omenala bụ ebubo ndị nwere ike ịchọta gị na mberede.
Ụlọ ọrụ Courier na ọrụ nzipu ozi na-eji ndị na-ere akwụkwọ na-eme akwụkwọ iji nweta nchịkọta a na-eme site na Ụkpụrụ Kanada na ókèala Canada. A ga-enyefe gị ụgwọ maka ọrụ ahụ.
A nyere Post Canada ikike iji ụgwọ ọrụ eji $ 5.00 maka ihe mail na $ 8.00 maka akwụkwọ ozi ekwupụta maka ịnakọta ọrụ na ụtụ isi nke Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ógbè Canada (CBSA) nyocha. Ọ bụrụ na enweghị ọrụ ma ọ bụ ụtụ isi, ha anaghị akwụ ụgwọ.
Ụgwọ ego ndị na-emekọ ego maka ụlọ ọrụ ndị na-ere ozi dịgasị iche ma ha dị elu karịa akwụkwọ Canada Post. Ụfọdụ ụlọ ọrụ na-eziga ozi nwere ike ịmịnye ụgwọ ego ndị ahịa (gụnyere ha na ọnụahịa ozi ozi), dabere na ọkwa ozi ị na-ahọrọ. Ndị ọzọ ga-agbakwunye ụgwọ ndị omenala na n'elu ma ị ga-akwụ ndị ahụ tupu ị nweta ngwongwo gị.
Ọ bụrụ na ịhọrọ ọrụ ozi maka mbupuga na Canada, chọpụta ma ọkwa nke ọrụ nyere gụnyere ụgwọ ndị omenha. Ọ bụrụ na ekwughị ya na saịtị ịntanetị ị na-eji, ị nwere ike ịlele nduzi ọrụ na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ onye ọ bụla ma ọ bụ kpọọ nọmba mpaghara nke ụlọ ọrụ ozi ịchọta atụmatụ ha.
Otú Newfoundland na Labrador si nweta aha ya
Ịghọta nchịkwa egbe na Canada
Ihe Onye Minista nke Minista nke Canada
Eziokwu ise gbasara Oktoberfest Ị Ma Amaghi
Kedu Ntọala Ndị I Kwesịrị Ịkụ Site Site na Egwuregwu Golf?
Akwụkwọ kacha mma maka Ndị Kraịst ọhụrụ
Karl Marx na Okpukpe Dị ka Opium nke Ndị Mmadụ
Asụsụ Ịtali Ịtali: Atụmatụ Ịtali kwa, Su, Con, Fra / Tra
Njikọ nke Verbs na-arụ ọrụ na Ọnọdụ Mgbanwe
Kedu Ụbọchị Ash Ash?
Ajụjụ na asụsụ
Usoro Arithmetic na Usoro Geometric
Ụbọchị Ụlọ Ụlọ Ọgwụ
Nailing "Ihe Nkụzi Kasị Mma Na-aga na Skydiving"
Mụọ asụsụ Japanese Renraku
Ụda - Gịnị bụ ụda ma ọ bụ ụda akụrụngwa?
White Gold adịghị acha ọcha ruo mgbe e debere ya
Ụlọ America Cobblestone House
7 Network Television na-egosi ụmụ nwanyị na-eto eto
Agha Viking-Agha Saxon: Agha Ashdown
Onye na-asụ Balloon Thaddeus Lowe
Ọbara na arụ
Mụta iji 'Je Suis Plein' mee ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị na French
ATP Definition - Ihe mere ATP bụ Mkpa Dị Mkpa na Metabolism